ट्राफिक व्यवस्थापन सुधारको नयाँ अभियान शुरु गरेका छौं | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / ट्राफिक व्यवस्थापन सुधारको नयाँ अभियान शुरु गरेका छौं
Posted by: युगबोध in अन्तर्वार्ता August 29, 2018	0 167 Views
जिल्ला ट्राफिक कार्यालय दाङका प्रमुख
भूगो लको हिसाबले ठूलो जिल्ला र अत्यधिक सवारी साधन रहे को दाङको ट्राफिक अवस् था सो चे जति राम्रो छै न । दे शकै धे रै दुर्घटना हुने जिल्लामध्ये मा दाङ पर्छ । कुनै न कुनै सवारी दुर्घटना दिनहु भइरहे का छन् । त्यसको नियमन गनेर् सरो कारवालामध्ये को पहिलो सरो कारवाला ट्राफिक नै हो  तर यति ठूलो क्षे त्रमा जम्मा ३१ जनाको दरवन्दी छ । अहिले १० जनाजति थप गरिए पनि त्यो संख्या पर्याप्त छै न । ट्राफिक समस् या र यसको उचित व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ । यसै सन्दर्भमा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय दाङका प्रमुख मदनबहादुर कुँवरसँग युगबो धकर्मी जे .एन.सागरले गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षे प यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । –सम्पादक
ट्राफिक व्यवस् थापन खासै प्रभावकारी भएन है ?
ट्राफिक व्यवस् थापन अलि जटिल विषय हो  । किनभने यसमा उद्यो गी, व्यापारी, विद्यार्थीलगायत सबै मान्छे हरु सडकमा हिंड्छन । यसको विकल्प नै छै न तर हाम्रो दाङको सडकको अवस् था भन्नुहुन्छ भने अव्यवस् िथत, साघुरो छ र त्यसमाथि पुल पुले सा नहु“दा झनै समस् या थपिएको छ । अकोर् कुरा यहाका सडकको मापदण्डअनुसारका सवारी साधन धे रै छन् । जस् तो टिप्पर, हे भी बस चल्ने गरे का छन् । यहा“को सडकको मापदण्ड भने को बढीमा १० टन क्षमता छ तर यहा ४२ टन सम्मका सवारी साधन चलिरहे का छन् । यसले गर्दा यहा“ सवारी दुर्घटना हुनु र सडक विग्रनुलाई त अस् वाभाविक मानिदै न । किनकि हाम्रो संरचना नै यस्तै छ ।
जिम्मे वारीको हिसावले भन्ने हो भने ट्राफिकको जिम्मे वारी भूमिका ३ दे खि ७ प्रतिशत हो  । यसका सरो कारवाला त अरु धे रै छन् । सडक विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, यातायात व्यवस् था विभाग, वन कार्यालय, नगरपालिका, उमहानगरपालिका, गाउ“पालिका, स् थानीय, प्रदे श र के न्द्रीय सरकारको भूमिका धे रै छ । ट्राफिक त उहा“हरुले गर भने को काम गनेर् हो  । यहा“को बाटो मा यातायातका साधन सुरक्षित हिडाउन निगरानी गनेर् हो  । कागजपत्र छ छै न ? त्यो हे नेर् हो  । ट्राफिकसंग मे कानिकल टे ष्ट गनेर् स्रो त साधन अहिले सम्म छै न । त्यो गनेर् काम यातायात व्यवस् था कार्यालयको हो  । समस् या धे रै छन । सडक अव्यवस् िथत हुनु, यहा“का नदीनालाका कारण पनि समस् या छ भने बढ्दो जनसंख्या र बढ्दो सवारी साधन, ट्राफिक नियमको पालना र जानकारी समे त नहुनु समस् याका रुपमा दे खिएका छन् ।
समस्या समाधानमा ट्राफिक आफै ले नागरिक अपे क्षा अनुसारको काम गरे न कि ?
त्यसो हो इन । प्रहरीको तीनदे खि सात प्रतिशत जिम्मे वारी हो तर अहिले ट्राफिक प्रहरीले तीन सयदे खि सात सय प्रतिशत काम गरे को छ । ल कसै ले भनो स ट्राफिक व्यवस् थापनमा मै ले यो काम गर्छु वा गरे को छु भने र । स् वयंसे वाको रुपमा कही कतै कसै ले ट्राफिक व्यवस् थापनको काम गरे को रहे छ भने जिल्ला ट्राफिक कार्यालयले सार्वजनिक सम्मान गर्छ तर कसै ले गरे का छै नन । सबै जिम्मे वारी ट्राफिकको थाप्लो मा फाल्ने काम भएको छ । खो लानालामा बाढी आउछ त्यहा“जनतालाई वारपार गराउने दे खि सवारी आवागमनको काम ट्राफिकले गरे को छ तर काम सडक विभागको हो  । सडकमा रुख ढल्छ तर रुख काटे र सवारी सुचारु ट्राफिकले गर्छ । त्यो वन कार्यालयको काम हो  । फो हरमै ला, पार्किङ, बजारमा सवारी सञ्चालनको काम नगरपालिकाको हो । त्यो काम पनि हामीले गरे का छौ ं ।
छडलगायतका हे भी सामानको लो ड, अनलो ड कतिबे ला गनेर् , त्यस् ता मालबाहक गाडी कतिबे ला शहरी क्षे त्रमा सञ्चालन गनेर् त्यो काम उद्यो ग वाणिज्य संघको काम हो तर पनि हामीले गरे का छौ ं । अब भन्नुस् ट्राफिकले कहा“ काम गरे न ? दावीका साथ भन्छु, ट्राफिकले जस् तै सबै सरो कारवालाहरुले भूमिका अनुसारको काम गनेर् हो भने दाङ दुर्घटनामुक्त क्षे त्र, हराभरा, विकसित, सभ्य शहर बजार बनाउन कुनै समय पर्खिनु पदैर् न । हो , नागरिकको अपे क्षा धे रै छ किनभने ट्राफिकले धे रै काम गर्छ, भने रै अपे क्षा पनि धे रै गर्नुभएको हो ला ।
फुटपाथ व्यवस्थापनमा यहाहरुको सहयो ग हुदैन त ?
वडा नं. १४ र १५ का अध्यक्ष र म आफै गएर फुटपाथका टहरा भत्काउने काम हामीले गरे का छौ ं । पार्किङ व्यवस् थापनका लागि ट्राफिक कार्यालयकै छे उमा टे म्पो पार्किङस् थल बनाइएको छ । मो टर साइकल र टे म्पो पार्किङका लागि २१ वटा ठाउ“ निर्धारण गरे का छौ ं । विनाश चा“ही छिटै गर्न सकिन्छ तर विकास गर्न समय लाग्छ । विकास क्रमिक रुपले हुने कुरा हो  । हामीले पार्किङको व्यवस् था, रुट निर्धारण र भाडाका टे म्पो हरुको बारे मा घो राही, लमही, तुलसीपुर र भालुवाङको समस् या समाधानका लागि लगातार १० दिन भयो लागिरहे का छौं । म आइसके पछि नर्तीमा ट्राफिक पो ष्ट राखे को छु । दुइखो लीमा थिएन, त्यहा“ पनि ट्राफिक पो ष्ट स् थापना गरियो  । सर्रामा जनशक्ति थप गरियो , भने घो राहीको बसपार्कमा स् थायी पो ष्ट स् थापना भएको छ । त्यस् तै तुलसीपुर बसपार्कमा पनि समस् या थियो  । दुई घण्टा जाने अनि फर्किने अवस् था थियो  । अहिले चौबिसै घण्टा रहने गरी अस् थायी पो ष्ट खडा गरे को छु । त्यस् तै तुलसीपुर–सल्यान सडकअन्तर्गत गो ठीखो लामा पनि पो ष्ट राखियो, भने प्रत्ये क युनिटहरु भालुवाङ, लमही, अमे लिया, जस् पुर, तुलसीपुर, नारायणपुरमा अधिकृत ले वलका जनशक्ति परिचालन गरिएको छ । ट्राफिक समस् यालाई समाधान गर्न सबै तिरको सहयो ग लिएर काम गनेर् प्रयास हामीले गरे का छौ ं । अहिले उपमहानगरपालिकाबाट पनि साथ सहयो ग पाइएको छ । त्यस् तै प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख र प्रदे श प्रमुखबाट पनि हौ सला प्रदान भइरहे काले नागरिकको से वामा लागिरहे का छौ ं ।
तर दाङमा दुर्घटना त रो किन सके नन्, किन ?
पुरानो तथ्यांक र म आइसके पछिको दुईमहिनाको तथ्यांक हे नेर् हो भने दुर्घटनामा ७५ प्रतिशतले कमी आएको छ तर भवितव्यरुपमा हुने दुर्घटनाहरु त अझै छन् । खासगरी ट्राफिक सचे तना नहु“दा बाटो काट्ने , मादक पदार्थ से वन गरे र सवारी चलाउने , गाडीको कन्डीशनको चे कजा“च नहुने , अत्यधिक गतिमा सवारी चलाउने कारणले अपे क्षित रुपमा दुर्घटना नरो किएका हुन्  तर हामीले टिप्पर, स् कूल बसलाई कारवाहीको दायरामा ल्याएका छौ ं । बढी यात्रु बो क्ने सवारी साधनहरुलाई कारवाही गरेका छौं । तर मलाई के लाग्छ भने कारवाही मात्रै समस् याको समाधान हो इन । त्यसै ले मै ले अहिले चालकको प्रतिवद्धता भने र नया अभियान सुरु गरे को छु । तीन/चार दिनमात्रै भएको छ त्यो अभियानको थालनी गरे को  । प्रत्ये क चालकलाई म एउटा कुशल चालक हु, अनुशासित ड्राइभर हु ।
म इमान्दार सडक प्रयो गकर्ता हु । मै ले सडकको नियम मान्ने छु । ने पालको कानुन मान्ने छु र मै ले ट्राफिक नियमको पालना गनेर् छु भने र उसको नाम, ठे गाना, गाडीको नम्वर, मो वाइल नम्बरसहितको हस् ताक्षर गराउने कामको थालनी गरे को छु । जसले चालकहरुलाई जिम्मे वार बनाउने छ भने अकोर् मै ले आध्यात्मिक हिसावले पनि अभियान थालेको छु । चालकको सवै भन्दा प्रिय वस्तु के हो ? श्रीमती, छो राछो री, आमा बुवा, बहिनी, भाइ वा अन्य कुनै ? त्यस्को फो टो ल्याएर लके ट बनाउने र सकभर ड्राइभिङ सिटको अगाडि झुण्ड्याउने नभए उसको घाटीमै पहिराउने काम गनेर्  । जसले सडकका हरे क मान्छे हरुलाई आफना प्रिय मान्छे ठानो स् र सजग भएर यातायात चलाओ स् । यो अभियानलाई कडाइका साथ लागु गरे र चालकहरुलाई जिम्मे वार बनाउने काम गरिरहे का छौ ं । जसले के ही न के ही जिम्मे वार हुने अवस् था आउने छ । त्यसै गरी उपमहानगरपालिका, उद्यो ग वाणिज्य संघ, सडक विभाग, यातायात व्यवसायी समिति, यातायात व्यवस्था कार्यालयलगायतका सरो कारवालाहरुलाई अनुरो धसहितको चिट्ठी पठाइसके को छु ।
दुर्घटनाको मुख्य कारण के हो ?
७५ प्रतिशत दुर्घटनाको मुख्य कारण चालक नै हुन । चालकको शारीरिक, मानसिक अवस् था कस् तो छ भन्ने कुराको ख्याल गरिएको छै न भने अकोर् कुरा मापसे पनि अकोर् कारण हो  । त्यस् तै ट्राफिक नियमबारे सचे तना नहुनु पनि हो  । त्यस् तै धे रै तीव्रगतिमा सवारी सञ्चालनका कारण पनि दुर्घटना भएको दे खिन्छ ।
मापसे गरे को चालकलाई रसिद काटे र छो डे पछि दुर्घटना रो किन्छ त ?
म आइसके पछि मापसे गरे का चालकहरुको लाइसे न्स प्वाल पारे को छु । र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्यांक हे र्नुस त्यस् ता घटनाका १० प्रतिशतलाई मद्दा चलाएका पनि छौ ं । मुद्दा चलाएर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ६० हजारसम्म जरिवाना गरे र छो ड्नु भएको छ । २४ दिनसम्म थुनामा राखे र अधिकतम् जरिवाना गनेर् काम पनि भएको छ ।
जिल्लाका सबै ठाउमा ट्राफिक किन दे खिदै न ?
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय दाङमा ३१ जनाको दरवन्दी छ । प्रदे श प्रमुखसंग समस् या दर्शाएपछि अहिले १० जनाजति थप पाइएको छ । थप गरिसके पछि नया“ पो ष्टहरुमा खटाइसके को छु । मुख्य बजार र दुर्घटना क्षे त्रमा ट्राफिक खटाइएको छ । गढवामा पनि ट्राफिक खटे को अवस्था छ । तर सवै ठाउमा ट्राफिक पु¥याउन सकिएको छै न । तर हाम्रो क्षमता, दक्षता र स्रो त साधनले भ्याएसम्म काम गरे का छौ ं ।
आगामी यो जना के छन ?
दाङमा सवै भन्दा भौ तिक संरचना तयार गर्नु नै हो  । अहिले राजमार्गसमे त खाल्डा खुल्डी भएको छ । त्यसलाई पुर्न हामीसंग स्रो त छै न । त्यसै ले सडक विभागलाई परिपत्र गरिसके को छु । सुरक्षित यातायात से वा, पार्किङ क्षे त्र, जे ब्रा क्रसिङलगायतका व्यवस् था गर्न सके आगामी ६ महिनाभित्र सवारी दुर्घटनालाई अधिकतम्रुपमा घटाउने काममा सवै लागौ ं । हामी पनि लाग्छौ ं । मुख्य कुरा सवारी दुर्घटना रो क्न सवै सरो कारवालाहरुलाई जिम्मे वार बनाउने हाम्रो यो जना छ । सो ही अनुसार काम पनि थालिसके को अवस् था छ ।
Previous: ‘प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित बनाउन खोजिदैछ’
Next: लमही नगरपालिकामा नागरिकता सिफारिस निःशुल्क